iphone Archives - SmartMe
Dom » Entries tagged with "iphone"
iPhone 13 misy Touch ID. Saika azo antoka izany
paoma, iPhone, mikasika id
Ny tranokala MacRoumors dia nahita fampahalalana fa ny maodely smartphone Apple iPhone 13 amin'ity taona ity dia hampiasa mpamaky rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery. Midika izany fa tsy ho ela ny Touch ID dia ho hita miaraka amin'ny ...
iPhone 13 dia hahazo mpampitohy vaovao? Apple dia manana hevitra mahaliana
paoma, iPhone, iPhone 13
Isika rehetra dia efa miandry tsy manam-paharetana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny iPhone 13. Ny zava-drehetra dia manondro fa ny finday avo lenta Apple farany dia hampiasa mpampitohy vaovao. Hanao ahoana izany ary inona ity patanty ity? Apple dia manolotra vaovao ...
Apple dia manandrana vahaolana vaovao. Ireo mpampiasa IPhone dia nahazo fampisehoana tokana
Ny kinova fahatelo vaovao ho an'ny iOS 14.5 dia nanolotra fanovana mahasoa sasany ho an'ireo mpampiasa iPhone. Jereo izay hevitra noresahin'i Apple. Apple dia manolotra endrika vaovao Noho ny fanavaozana vaovao, tsy ny fitaovana amin'ny paoma ihany no azonao arahana, ...
iPhone 13 dia hanana fahatsiarovana 1 TB?
Ny zava-drehetra dia manondro fa ny iPhone 13 dia hampiasa memory Memory 1 TB. Hatreto dia tsy azo natao afa-tsy ho an'ireo mpampiasa iPad Pro io safidy io. Izao dia efa hiova. iPhone manana fitadidy bebe kokoa? ...